Kedu ka esi agafe crunches igwe? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Etu ị ga - esi eme ịgba ịnyịnya ígwè - ụzọ dị mma
Etu ị ga - esi eme ịgba ịnyịnya ígwè - ụzọ dị mma
Kedu ka esi agafe crunches igwe?
Ijimeekacrunch ịnyịnya ígwè:
Dina n’elu azụ gị. Gbue ikpere gị ma kụọ ụkwụ gị n'ala, obosara-obosara iche.
Jide gịNgalaba. Bulie ikpere gị ruo ogo 90 ma bulie ahụ gị elu.
Iku ume ma megharia ogwe aka gi, megharia aka nri gi na ikpere aka ekpe gi na aka gi.
Na iku ume ma laghachi na ọnọdụ mmalite.
Kedu ihe na-eme ụmụ okorobịa? Jeff Cavaliere, ATHLEANX.com. Taa, m ga - egosi gị ụfọdụ ihe ị na - ekwesịghị ime mgbe ị na - eme ihe.
N'ezie, nke a bụ otu n'ime ha. Ọ bụrụ na ị na-ele okwu ahụ anya, 'Amaghị m ihe bụ nsogbu ya' mgbe ahụ, ọbụnadị ihe kpatara na ịchọrọ ịnọ ebe a wee hụ ihe m ga-egosi gị kwa ụbọchị na egwuregwu ọ bụla. Mere kpatara. Ekwere m gị na ị ga - ahụ ndị na - eme ihe ndị a.
Ihe dị mma bụ mgbe ịlechara isiokwu a, ịgaghị abụ otu n'ime ha ọzọ, nke bụ eziokwu bụ na ị ghọrọ ezigbo onye na-ekesa ozi ka i wee nwee ike inyere enyi gị aka. Ugbu a ka anyị zọpụta ịnyịnya ibu gị. Anyị na-amalite na ihe mbụ ịkwesịrị ịkwụsị ime, nke ga-eme ka ị ghara ikwughachi ya.
Ndị be anyị, ejiri m n’aka na ị hụla ka ndị mmadụ na-eme ụdị ihe a na mgbatị ahụ oge niile. Fọdụ ndị mmadụ ga-ekwu na ọ bụrụ na ha ga-eme ha ọsịsọ a iji mee ka ahụ ha ghara ịdị na-efegharị mgbe ụkwụ kwụlitere. Nke ahụ abụghị eziokwu.
Ihe bụ, ha na-ahapụ mgbalị niile ha na-eme ebe niile mana na ha nọ. Naanị ihe m na-eche bụ nnukwu mma. Ka ị na-agbakọba akara elu dị elu, ọnụọgụgụ adịghị mkpa.
Mgbe ọ bịara na nkwụsị gị, ịchọrọ ijide n'aka na mgbado na-esite na mpaghara ị na-achọ ịzụ ma na-agbada na ya, yabụ mgbe ị hụrụ ka m na-eme ụkwụ kwụ ọtọ, ọ naghị adị ka ya mere anyị ' na-agbali ime ka abs ahụ rụọ ọrụ ahụ. Ka m ji nwayọ gbagote, m na-elekwasị anya na ịgbatị pelvis, na-emegharị ogwe, na abs na-arụ ọrụ ahụ. Enwere m ike iweta ya n'ala na mmemme mbido.
Anyị ka nwere ike ịchọpụta ya. Ysmụ okorobịa na-etinye onwe gị na nke a ka ị na-apụ n'ụdị. Achọghị m ịma ọsọ ọsọ ị na-aga, naanị m na-eche banyere ịnweta otu ezigbo nzaghachi n'otu oge.
M kwere nkwa, ọ bụrụ na ịmalite ịme otu ihe ahụ, nsonaazụ gị ga-akawanye mma. Omume a na-esote bụ nke nwere ike ime ka ụfọdụ n'ime gị sụọ ngọngọ na mbido isiokwu a. Nke ahụ pụtara: ị maara ihe dị njọ na mmega ahụ? 'Ọ bụ crunch.
Anaghị m akpọ crunch asị. Enwere nzube maka crunch. Ọ bụrụ n’ịma ụma mee nwayọ nwayọ, ee, ị ga-enweta nsonaazụ kacha mma.
Ma enwere ihe ọzọ na-ezighị ezi na ya. Enwere mkpirisi dị mkpirikpi. Nke a abụghị mmeghari mmeghari zuru ezu.
Maka ebumnuche ụfọdụ, anyị na-ahụ n'anya na ibelata oge nkwụsị mgbe ị na-eme ọzụzụ. Nwere ike ịlaghachi n'elu ihe kwụgidere ụkwụ na-ebuli na-ekiri. Gịnị ka ndị mmadụ na-emekarị? Naanị ha na-akụkwụ ụkwụ na mpaghara etiti a.
Don't naghị ewere ya site na ngagharị zuru oke. Yabụ, dọpụta ụkwụ gị niile. Gaba gabiga ahu dum.
Dị ka m na-eme ebe a. Mee otu ihe ahụ mgbe ị na-eme crunches gị n’ala. Gaa na ala.
Mee ka bs gbasaa, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, na-anọpụ iche na azụ gị n'ala. Anọla naanị ịnọ n'ọnọdụ a. Enwere obere ụlọ ịkwaga dị ka crunch.
Mgbe ị wepụrụ ọkara ya, ị na -ebelata ụdị nsonaazụ ị nwere ike ịhụ site na mgbatị gị. Ya mere mee m ụmụ okorobịa. Bido ịgbatị na ịmatakwu ụdị ngagharị zuru oke na mmega ahụ niile ma ana m ekwe gị nkwa na ị ga-ahụ nsonaazụ kacha mma, nke na-esote bụ nke m kpuchie na ọwa mmiri mana ọ ga-emeghachi ya n'ihi na ọ dị ezigbo mkpa, ọkachasị gbasara ụdị anya ị ga-ahụ maka etuto gị ma ọ bụrụ na ị nweta ume na-ezighi ezi a, anyị anaghị agbanye ọsọ site na nkwughachi ma belata ha iji mee ha ngwa ngwa o kwere mee, anyị nwere ike ijide ume gị ma ọ bụ iku ume gị niile. .
Hụ, ọ bụrụ na ị na-eme mgbatị afọ dị ka crunch ala a, ị naghị eme ihe m na-eme ebe a. Chọghị iku ume ma wepụ afọ gị n'otu oge. Chọrọ iku ume mgbe ị banyere na rep.
Anyị maara nke a. Ma ka ị na-ekupụ ume, gbalịa iweda afọ gị ala ma banye. Do na-eme nke a site na ime ka akwara na-akpọ transverse abdominus.
Ndị be anyị, anyị maara na ọ bụ akwara na-aga n'úkwù anyị n'ụzọ dị otú a, na-eme ka ọ kwatuo, dị ka echiche nke ịmịkọrọ afọ ị nwere ike iwetu afọ gị ma dajụọ ka ị na-ekupụ. Ya mere, mgbe ọ flattens si. Chọghị iku ume na ịfụ otu oge.
Ya mere afụ. Nke a bụ ihe ọtụtụ mmadụ ga - eme na - akuzi njikwa mọzụlụ afọ. Yabụ na ịchọghị nke ahụ.
Na otu ugboro ugboro nke ihe omumu ọ bụla ị na-eme, ịchọrọ ịchọọ maka nkwekọrịta ahụ ma ọ bụ ịmetụta mmetụta nke obe na iku ume ka ị na-eku ume. Ọzọkwa, ana m ekwe gị nkwa na ọ bụghị naanị na ị ga-enweta mmega ahụ nke mmega ahụ, kama ọ dị mma na ọdịdị ala nke nkwughachi niile ị chịkọtara. Nke na-esote n'ezie na-abanye n'okpuru akpụkpọ m n'ihi na ana m anụ ya ọtụtụ mgbe.
Ọtụtụ ndị na-agba mbọ ịrụ ọrụ ha ga-eme nke a mana ha ga-ama ọfụma n'ihi na ha anụla na ịrụ ọrụ ọ bụla ha ga-eme ka ha gbochie ha. Ysmụ okorobịa, biko kwụsị. N’ezie, mgbe ị na-eme ihe, gbaa mbọ hụ na ị na-eme ihe ị na-eme.
Egosiri m gị ngosipụta a n'ihu. Ihe obliques gi gha adi nma n’anya ya. Ma mgbe a na-ahụ ihe ọhụụ gị na ọkwa dị ala nke anụ ahụ, ha na-arụ ọrụ dị egwu nke ịkụda eriri ahụ dum, na-enye gị ụdị V-cut nke ụmụ okorobịa ahụ ga-ekwu maka ịchọrọ ime.
Yabụ echiche bụ nke a: ịkwesịrị ịmalite ịme ihe ị na-eme. Karịsịa, ịkwesịrị ịmara nke otu esi arụ ọrụ ha. Ọ laghachi azụ na nke mbụ ya n’isiokwu a.
Nke a pụtara na otu mkpụrụedemede ọ bụla ị maara otu ị si eme ya. Chee echiche gburugburu ma chee, 'Ọ dị mma, ana m agbagọ, yabụ ana m echezọ.' Emela ihe ndị ahụ na-eche na ị na-enweta ihe ọ bụla n'ihi na ndị mmadụ na-agwa gị na ha dị mma n'ihi na ị na-agbagọ ihe ị na-eme.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla dị elu, cheta, ọ bụghị maka ọsọ na naanị ịmegharị ntụgharị ahụ site na mkpọda. Initi na-ebute ya. Nwere ike ịhụ ha mgbe ha bidoro ngagharị a oge ọ bụla m gara aka nri na aka ekpe na aka ekpe.
Achọrọ m ka ị mata maka nke a. Mana, n'ozuzu, Achọghị m ịma ihe omume dị egwu ị na-eme. Jide n'aka na ị na-eme ha.
M na-ekwe gị nkwa na ala ala ga-aka mma ma ọ bụrụ na ịmee. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị ga-eme ihe ị ga-eme maka ụfụ gị na ihe ị na-agaghị eme, enwere otu ihe m na-achọ mgbe niile icheta ịgụnye ma ọ dịkarịa ala ụfọdụ ọrụ nwa ehi na ụfọdụ ọrụ agba. Nke ahụ dị mma.
Calfọdụ ọrụ nwa ehi. Lee, oge ọzọ ị ga - eche maka oge ị ga - abanye na ebe a na - adọba ụgbọala nke McDonald, ịchọrọ itinye ụkwụ gị na - eme ngwa ngwa, rụọ ọrụ ụmụ ehi gị, ma gafee ngwa ngwa dịka i nwere ike. Oge ọzọ ị na-eche maka iri ihe ịmara na ị gaghị eri, ị ga-achọ ime ihe atọ iji mechie ọnụ gị ka ị ghara.
Ndị be anyị, nri dị ezigbo mkpa. M na-ekwe gị nkwa. Agaghị ahụ ihe nrụsi ọrụ ike gị belụsọ ma i kweta iri nri dị mma karịa efere na ihe ị tinyere n'ọnụ gị.
Ọ dị oke oke egwu, enweghị m ike ịkọwapụta ya. Ya mere, mgbe ị na-eche banyere ụdị abs mgbatị ma ọ bụ ọbụna niile nke Atụmatụ m dị gosiri gị ebe a na ihe ị ga-eme; Become na-adịwanye irè karị mgbe ị nwere ike itinye onwe gị na ihe m maara bụ nke kachasị sie ike. Nke ahụ bụ, ịmatakwu ihe ị na-eri.
Ndị mmadụ, ọ gaghị ekwe omume. Nwere ike iri ihe ndị masịrị gị ma ana m agba gị ume ime nke a n'ihi na ọ nweghị ụzọ ị ga-esi jigide ya belụsọ ma ị chọta atụmatụ iji nye gị ohere iri otu ịchọrọ. N'ezie, anyị nwere atụmatụ dịka nke a niile ATHLEANX.com, gụnyere na mmemme anyị niile.
Naanị m na-eme ya, ana m eme ka ọ bụrụ ihe ezi uche dị na ya, ana m eme ya ihe ị nwere ike ịgbaso. Ọ bụghị naanị ụbọchị ole na ole, mana ị nwere ike ịgbaso ya maka ndụ gị niile. Otu ụzọ ahụ m na-eri eri afọ, na afọ, na afọ iji debe ogo abụba ahụ m na-eme, na-enweghị nhụjuanya na enweghị mda mba.
Ọ gaghị ewe oge. Ihe niile agwụla na ATHLEANX.com.
Ka ọ dịgodị, ọ bụrụ na ịchọta na isiokwu na-enye aka, hapụ ihe gị na isi aka. Mee ka m mara ma ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla ọzọ ị ga-ekwu banyere ya na m ga-eme ike m niile ime nke ahụ maka gị, ọ bụrụ na ịnwebeghị biko ịdenye aha ma mee ka ọkwa gị rụọ ọrụ ka ị ghara ịhapụ isiokwu, ọ bụrụ na anyị edee otu . Ndi be anyi, anyi ga-ahu ozo n’oge na adighi anya.
Kedu ihe dị iche na crossover crunch na igwe crunch?
Bgba ígwèikiaka na ikperecrunchesObe ahucrunches bụmgbatị mgbatị ahụ na-eme mmega ahụ nke na-eleba anya na abs na obliques ma gụnyekwa obere mgbatị hip na quadriceps. Onyecrunches igwerụọ ọrụ ahụobliqueakwara akwara nwere mmeghari uzo na-agbakwunye nke na-eme ka nkwụsi ike na ike dị ike.Ọgọst 9 2020
Ngwurugwu igwe dị mma karịa crunches?
Nacrunch ịnyịnya ígwè
Ihe kpatara ya: Na ọmụmụ ihe San Diego, mmega ahụ bụ nke abụọ kachasị elu na-ewusi obliques na ndị sonyere. Ọ na-akpalitekwa ọrụ ndị ọzọ n'ime afọkarịanke ọdịnalacrunchgụnyere ala ala gị na obliques.Jenụwarị 7 2020 g.
Gịnị ka m nwere ike iji kama ịnyịnya ígwè crunches?
Ike na ụda nile n'ígwé nke abdominal mọzụlụ ma n'enweghị ihe na n'ụzọ dị irè, M nwere ike ikwu n'úkwù cincher na ighikota dị ka onye ọzọ nacrunches igwena usoro mgbatị onwe gị.19.05.2018
Ogologo oge ole ka m kwesịrị ịme achịcha igwe?
Chọọ maka 15 ruo 20cruncheskwa set.
Ọ bụrụ na ị na-amalitecrunches igwegbalịamee1 ka 2 tent. Mgbe ahụ, rụọ ọrụ gị ruo ma ọ dịkarịa ala 3 ma ọ bụ 4 set nke 15 ruo 20crunchesmaka mgbatị ahụ siri ike nke na-ewuli gịNgalaba. Ọ dị mma ịgbanwe ọnụ ọgụgụ nkecrunchesgịrụọmaka otu set.
Gịnị bụ V elu?
Gịnị bụ aV-Up? NaV-Upbụ mmegharị ahụ zuru oke nke na-arụ ọrụ gị, ụkwụ, azụ na ubu. A na-ahụ mmega ahụ n'anya site na ndị na-ahụ maka ahụ ike maka ikike ịrụ ọrụ akwara afọ na ala n'otu oge. AV-Upgụnyere ịnọdụ ala ma ọ bụ ute ma dozie ozu ahụ n'ụdị leta ya “V. '
Plankbụ otu n'ime kalori kachasị mmana-ere ọkụna ihe omumu bara uru. Aplankjigide otutu akwara n'otu oge, si otú a na-erite uru bụ isi nke ahụ gị. Ọ bụghị naanịna-ere ọkụiheabụbagburugburu ime afọ gị, ha na-arụkwa ọrụ site n'inye gị ọnọdụ ka mma, mgbanwe dị ka nke ọma.23 jan. Dec 2019
Gini mere o ji adighi gi nma?
Dabere na Harvard Medical School,crunchesHa siri ike n'azụ gị, ebe ọ bụ na ha 'na-agbanye ọkpụkpụ azụ gị n'ala ma na-arụ ọrụ mgbatị gị, akwara ndị na-esite n'apata ụkwụ gị na lumbar vertebrae na azụ ala.' Mgbe ihe mgbakwasị ụkwụ gị siri ike, ha na-adọta azụ gị dị ala, nke nwere ike ibute obereApr 2 2018
Ime ịnyịnya ígwè na-eme ka eriri gị belata?
Icygbọ ịnyịnya ígwènwere ike inyere ụdanke gimidsection natẹme l'ẹka-a, na-eme ka ọ bụrụ ihe zuru oke ịbanye nanke gitupu oge mgbatị mgbatị. N'ihi nacrunches igwechọrọ mmegharị ụkwụ karịa ọkọlọtọcrunches, ha dịkwa oke mma iji melite nkwụsi ike, mgbanwe na nhazi.Ọnwa Ise 27, 2021
Ihe mmega nwere ike dochie ịkwọ ụgbọ mmiri?
Ben Booker: Dumbbell tụgharịa flyes. Mgbe emechara ya, nke ammega ahụbụ nnukwu azụ na azụ delt na-ewu ihe na-arụ ọrụ dị irèọzọka ahiri. Ọ naghị achọ ibu dị arọ iji rụpụta nnukwu nsonaazụ. Nọdụ ala na nsọtụ bench ma na-adabere dịka gịnwere ikemgbe ị na-ejigide azụ.June 4. 2017 Nọvemba
Kedu ụzọ kachasị mma iji mee obe Crunch?
Debe spain gị n'ọnọdụ na-anọpụ iche ma jiri aka gị kwado olu gị. Kuru ume ka ị na-apịcha azụ gị ma mee ka ụkwụ gị kwụ otu ebe ka ị na-ewe ikiaka gị na ikpere na-abụghị ikpere. Obebe obe na-ele anya ma abs na akwara akwara. Omume a na-enyere aka iwusi isi ike, na-akpụzi úkwù ma na-agbanye mgbidi nke afọ.
Kedu ihe ị kwesịrị ịma banyere igwe crunches?
Iku ume ziri ezi dị mkpa iji nweta uru kachasị na mgbatị ahụ. Ofụpụta zuru oke mgbe ị na-agbagharị ahụ gị n'akụkụ n'akụkụ. Buru iku ume ka ị na-eweghachi ahụ gị dị elu na nnọpụiche. Dabere na mgbanwe gị, ọ bụghị iwu ka ị metụ ikpere gị aka na ikpere gị.
Kedu otu esi eme igwe na-aga na afo?
Tinye aka gị n’akụkụ isi gị. Iji malite mmega ahụ malite iickingomi ngagharị nke ịnyịnya ígwè. Weta ikpere aka nri gị gaa n'isi gị ka ị na-atụgharị ahụ gị dị elu. Gbalịa imetụ aka ikpere aka ekpe gị na ikpere aka nri gị. Mgbe ahụ dozie ụkwụ aka nri gị azụ ka ị na-ewebata ikpere ekpe gị. N'otu oge, megharịa ahụ gị elu n'akụkụ nke ọzọ.